जनमत नै सही निकास
नेपालको राजनीतिक गतिरोध कहिल्यै नफुक्ने अनौठोखाले गाँठो परेको अवस्थामा छ । एकपछि अर्काे समस्या र द्वन्द्वले राजनीतिक वातावरण उदेकलाग्दो बन्दै गएको छ । २०४६ को सफल जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा पुनः स्थापित संसदीय शासन प्रणालीले मुलुकलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिए पनि नतिजा सन्तोषप्रद देखिएन । त्यसैले २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले हतियार उठाएर सशस्त्र आन्दोलन थाल्यो । बहुदलीय शासन प्रणालीमा प्राप्त उपलब्धिको राम्रो व्यवस्थापन र जगेर्ना गर्न नसक्दा मुलुक एकपछि अर्काे भुमरीमा फसिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा मुलुकले यस अवधिमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि जनस्तरमा त्यसको अनुभूति गर्ने अवस्था भने निर्माण हुन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण बनेको छ । भोलिको राजनीतिक र आर्थिक गन्तव्य के हो ? हाम्रै नेतागणलाई थाहा छैन । अहिले संसद्मा दर्ता भएका दुई प्रस्ताव त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव र सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने आसयले दर्ता गराएको संविधानमा संशोधन प्रस्ताव अप्ठेरोमा फलेको फर्सी बन्न पुगेको छ । कुनै योजना वा कार्यक्रममा आधारित नभई सनक र आवेगमा गरिने निर्णयको नतिजा हो । सत्ता पक्षले लामो गृहकार्य गरी संसद्मा दर्ता गराएको भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । संसद्मा कायम गतिरोधका कारण अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग पनि छायाँमा परेको छ । गतिरोध हटाउन सभामुखको पहलमा पटक–पटक वार्ता र छलफल भए पनि निकास प्राप्त भएको छैन । त्यसैले राजनीतिक क्षितिजमा व्याप्त अन्योल अझै लम्बिने सम्भावना छ ।
मुलुकमा कायम अन्योल र अनिश्चयको वातावरण अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको पहलकदमी प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढेको छ । यही रूप र ढङ्गमा राजनीति अघि बढ्ने हो भने नेपाली जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था छैन । विद्यमान राजनीतिक गतिरोध हटाउन राजनीतिक दलबीच नयाँ शिराबाटै पहल हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ । कतिपयले अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न नयाँ जनादेश आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । सर्सर्ती हेर्दा तर्क राम्रै लाग्छ । विवादको निरूपण ताजा जनादेशबाट लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । संविधानको सफल कार्यान्वयन सबैभन्दा महŒवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । जबसम्म जारी संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तबसम्म संविधानसभाको कार्यभार पूरा भएको मान्न मिल्ने अवस्था छैन । यसका लागि अहिलेको संविधानसभाले केही काम गर्न अझै बाँकी छ । त्यो पूरा भएपछि ताजा जनादेश खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।
जनादेशकै कुरा गर्दा केही तीता कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । सङ्घीयता अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा विवादित मुद्दा बन्न पुगेको छ । यसैगरी, धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पनि साझा मत वा अवधारणा छैन । यस्ता महŒवपूर्ण र दीर्घकालीन असर पर्ने संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलको नेतृत्वले जनताको भावना बुझ्ने कुनै चेष्टा गरेको छैन । सीमित नेताको इच्छा र चाहना नै जनभावना हो भन्ने अर्थ लगाउन खोज्नु गलत हुनेछ । यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरेर निर्णय गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । यसका लागि ठूला दलका नेताहरूले आँट गर्दा जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने थियो । यो हिम्मत देखाउने हो भने मुलुकमा कायम गतिरोध चुट्कीको भरमा अन्त्य हुन सक्छ । सङ्घीयताको विजारोपण गर्ने राजनीतिक दलकै लागि अहिले यो काउछो बन्न पुगेको छ । सुरुवाती अवस्थामा जनताको समर्थन पाउने आशा र लोभमा हरेक जातजाति, वर्ग र समुदायलाई छुट्टै राज्य दिने सपना देखाइयो । यसले जनतामा धेरैखाले आकांक्षा चुलिएर गए । त्यसैले हालको सात प्रदेशले मात्र सबैको आकांक्षा पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । यो विषयमा जति विवाद र छलफल गरे पनि निकास पहिल्याउन मुस्किल छ । यस्तै धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि हाम्रा लागि सहज छैन किनभने करिब ९० प्रतिशत ओमकार परिवारको बसोवास रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको सवाल जबर्जस्ती कसैको इच्छा लाद्न ल्याइएको भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसैले यी दुईवटा विषयमा जनमत लिन अग्रसर हुँदा केही फरक पर्ने देखिन्न तर नेताहरूमा त्यो साहस भने आवश्यक छ ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्था हेर्दा उराठलाग्दो रहेको छर्लङ्ग देखिन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संसद् फगत लहडबाजीको सिकार भएको छ । संसद् एमालेको कोपभाजनको बन्दी बन्न पुगेको छ । एमालेजस्तो आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको पर्यायका रूपमा चिनाउन खोज्ने दलले भावी प्रभाव र असरको ख्यालै नगरी संसद् अवरुद्ध गर्दा जनप्रतिनिधिको मुख्य थलो रमिते बन्न पुगेको छ । संसदीय काम कारबाहीमा गरिएको अवरोधले संसद् बेकम्मा बन्न पुगेको छ । यसबाट संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडेको छ । संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भन्नेले संसद्मा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको प्रस्तावमा छलफल गर्न नै नदिने भन्ने अवस्था पक्कै उचित मान्न सकिन्न । जनताको सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो भनेकै संसद् हो तर त्यही संसद्को खिल्ली उडाउने काम गरिएको छ । यसले एमालेको प्रजातान्त्रिक विचार र शैली नै धरापमा परेको छ । यो हठवादी सोच र शैलीबाट मुक्त नभएसम्म मुलुकले सही दिशा पक्रन मुस्किल छ । यतिबेला संसदीय निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ भन्ने हल्लाका भरमा चुनावको माग गर्नु सोम शर्माको सातुको कथाजस्तै हुनेछ । २०६५ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुअघि नेपाली काँग्रेसले बहुमत पाउने अनुमानमा निर्वाचन घोषणा भएको थियो । तर, चुनावको नतिजा आउँदा माओवादी पहिलो र काँग्रेस दोस्रोमा खुम्चिएको इतिहास पुरानो भएको छैन । यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि पनि माओवादीको दुईतिहाइ मत आउने अनुमान नगरिएको होइन तर परिणाम ठ्याक्कै उल्टो आयो । अब यही इतिहास एमालेको पक्षमा नदोहोरिएला भन्ने के छ ? त्यसैले अनुमान र हल्लाका भरमा कदम चाल्नुभन्दा बडो सोचविचार गरेर मुलुकको हित हुने निर्णयमा केन्द्रित हुनु नै दलका नेताहरूका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै हरेक विवादको हल खोज्ने प्याकेज नै बनाइनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । सबैलाई मान्य हुनेगरी प्याकेजमा हल खोज्ने उपाय भनेको विवादित विषयमा जनताको अभिमत लिनु नै हुनेछ । देशलाई अग्रगमन दिने वाचासाथ नेतृत्वले जनविश्वास जित्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । यस दिशामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले इमानदार प्रयास गर्नु अपरिहार्य छ । साँच्चै भन्ने हो अहिले सबै विवादको निकास खोज्न देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्ने हो । सबैलाई गोलबद्ध गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने काँग्रेस नै अरूको पिछलग्गु हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । मुलुक यतिखेर दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलको एजेण्डामा अघि बढिरहेको छ ।
सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता माओवादीको एजेण्डा हो भने अहिलेको गतिरोध एमालेको एजेण्डा हो । यहाँ नेपाली काँग्रेस त केवल रमिते भएर बसेको अवस्था छ । अगुवा पार्टीको भूमिकामा काँग्रेस चुकेको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले काँग्रेसले देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिको मुद्दामा सबैलाई एकताबद्ध हुनेगरी सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि निकासको बिन्दु भनेकै विवादित विषयमा जनताको राय सुझाव लिएर अघि बढ्ने हो, अर्थात् नमिलेका मुद्दामा जनमतसङ्ग्रहमार्फत छिनोफानो गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।